Lenovo wuxuu soo saaraa laptop-kiisa ugu horreeya weligiis - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Lenovo wuxuu soo saaraa Laptop-ka Koobaad ee Kooban oo Kooban
Lenovo wuxuu soo saaraa laptop-kiisa ugu horreeya weligiis
Iyada oo ay soo galaan shaashado isku dhafan ee casriga ah, waxaa la filayay in tiknoolijiyada ay timaado laptops. Waa Lenovo oo horey u soo dejisay.
Inta lagu jiro shirkiisa Dardar-celinta, soo-saaraha Lenovo ayaa shaaca ka qaaday PC ah nooc nooc oo cusub. Its cusub ThinkPad X1 wuxuu leeyahay muuqaal 13,3 inch oo lagu dabooli karo qeybta. Soo bandhiga kumbuyuutarka kumbiyuutarka ee ugu horreeya.
Lenovo wuxuu soo saaraa laptop leh bandhig muuqaal leh
Si miisaanka loo siiyo bandhigiisa, Lenovo ayaa la socday isaga oo ku jira nooc ka mid ah nooca cusub ee ThinkPad X1. Marka la eego qeexitaankiisa, wax yar ayaanu ognahay in shaashaddu ay tahay xNUMXK 2K 13,3 OLED, oo awood u leh inay isku laabaan qeybtii, yaraynta ballaadhka badhka inta lagu jiro gaadiidka. Tijaabinta Tilmaaminta ee 4: qaabka 3 waxaa loogu talagalay caawimaadda LG.
Inta kale, waxaan ognahay in kombiyuutarku leeyahay Intel processor ah oo ku shaqeeya Windows. Naqshadeynta oo la soo bandhigay intii shirku socday waxay leedahay Wacom stylus waxaana lagu buuxiyay dekedda USB-C.
Qaabkan cusub ee ThinkPad X1 waa nooc ka mid ah
Lenovo ayaa qorsheysatay loona soo saaray qorshahan layiran ThinkPad X1 si loogu badalo laptop. Waxay ka tirsan tahay qaybtaas mana aha tan kiniinnada. Hase yeeshee, maqnaanshaha kumbiyuutarka jir ahaaneed ayaa hubaal ahaan u ah cuuryamiinta kuwa gelaya qoraalo badan.
Marka la eego qiimaha iyo taariikhda helitaanka UFO ee ka mid ah laptops, waxaan ognahay in lagu iibin doono inta lagu jiro sanadka soo socda ee heerka qiimaha aan weli la aqoon.
La soco Lenovo Z6 Pro oo cusub, oo leh khibrad sawir leh 4 sawirada
Shirkadda Lenovo Smart ugu dambeyntii waxay timaaddaa Faransiiska
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/lenovo-devoile-le-tout-premier-ordinateur-portable-a-ecran-pliable-316001
ICT: Gabon wuxuu gabdhaha ku dhejiyaa nalalka